Olee otú mbubata AVI Videos ka Final Cut Pro on Mac (Mavericks gụnyere)
> Resource> FCP> Olee mbubata AVI Videos ka Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Dị ka ị maara, ọtụtụ AVI faịlụ eji DivX, XviD ma ọ bụ 3ivX mkpakọ codecs. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie AVI faịlụ na Final Cut Pro, ị ga-mkpa iji tọghata ya dakọtara formats mbụ, ya bụ MP4. MOV, M4V, ma ọ bụ DV.
Iji tọghata AVI ka Final Cut Pro seamlessly na effortlessly, AVI ka Final Cut Pro Ntụgharị ukwuu tụrụ aro. Ọ nwere ike mbupụ ndị ọkachamara encoders, ya bụ Apple Intermediate Codec, ProRes na DNxHD dabara iMovie, FCP wdg kasị mma. Mgbe akakabarede, ị ga-ahụ na converted faịlụ na-nnọọ ka gị na FCP, ị nwere ike mfe na lorịị dezie ha na-enweghị mgbalị na n'otu ntabi ịkọrọ videos site nrụọrụ.
Free download ya ikpe mbipute ebe a:
Nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na otú iji tọghata AVI ka Final Cut Pro X
Mbụ, Mwepụta ikpeazụ ịkpụ pro avi Ntụgharị, pịa File Ibu Ibu Media faịlụ site isi menu na-agagharị na kọmputa gị ike mbanye na họrọ AVI faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Ma ọ bụ i nwere ike mfe ịdọrọ-na-dobe faịlụ n'ime a ngwa maka converting.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke AVI ka ikpeazụ ịkpụ p ro x Ntụgharị, ọ bụ nkecha ma dị ike.
Nke abụọ, Pịa abụọ elu-akụ na ala nke a usoro si ebi ndụ, wee họrọ Final Cut Pro si edezi udi. Pịa mmepụta na ala ekpe nke usoro ihe omume window, ị nwere ike họrọ ndekọ maka ịchọta converted faịlụ.
Nke atọ, na-amalite akakabarede. Mgbe ntọala niile na-mere, dị nnọọ kụrụ tọghata otú ahụ Ntụgharị ga-amalite converting avi ka ikpeazụ ịkpụ pro x ozugbo.
Ihe Ọmụma nkekọrịta:
AVI (Audio Video Interleaved) faịlụ ndị a nkịtị usoro maka abịakọrọ obere vidiyo. Dị ka a video akpa, ọ nwere ike ịnwe audio / video abịakọrọ iji mgbanwe dị iche iche codecs (nke a bụ yiri ihe .mp4 faịlụ ma iji MPEG4 mkpakọ ma ọ bụ H264 mkpakọ). The video àgwà nke AVI faịlụ bụ na-emekarị mma. Na AVI format na-ebe na-akwado na ọtụtụ dị ukwuu nke sistem na ngwaọrụ. The mwepu nke AVI bụ na mkpakọ ọkọlọtọ bụghị eluigwe na ala. Dị iche iche mkpakọ ọkọlọtọ nwere ike ime ka ọdịda na-egwu egwu ihe AVI faịlụ abịakọrọ na n'oge ọkọlọtọ na Kacha ọhụrụ windows media ọkpụkpọ. Ị nwere ike ụfọdụ iyi fim ma ọ bụ TV na-egosi na AVI format, ma ọ bụ ezinụlọ ụfọdụ na-AVI footages si gị dijitalụ camcorders, dị ka egbe ala camcorder ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka zọpụta na gị Mac si ike mbanye.
Free Gbalịa AVI ka FCP Ntụgharị maka Mac Ugbu a Buy AVI ka FCP Ntụgharị maka Mac Ugbu a